Voadika ny 14 Novambra 2012 4:02 GMT
Efa nambaranay tamin'ny lahatsoratra teo aloha, ny hackathon manaraka ho an'ny faritra Amerika Latina : Fampandrosoana an'i Amerika Latina 2012 [es]. Saingy toa misy mpamaky sasany mety tsy hahazo ny tena dikan'ny hackathon, sy ny ilàna azy.
Vao tsy ela akory izay, David Sasaki, avy amin'ny Omidyar Network, namintina [es] ny toetra fototry ny angon-drakitra misokatra tao anaty lahatsoratra mitondra ny loha-teny hoe “The Eight Main Principles of Open Data (and Hipsters)” “Ireo Fototra Valo Lehiben'ny Angon-drakitra misokatra (sy Hipsters)”:
Soratra miverina: Andro 1 Amin’ny Fampandrosoana an’i Amerika Latinina 2012 · Global Voices teny Malagasy
[…] Latin America 2012 [en] Inona Marina Ny Hackathon? Ary Inona Ny Angon-Drakitra Misokatra? [mg] Hackathon Ho an'ny Daholobe: Ahoana ny Fanomanana Hackathon? [mg] Miha-antomotra ny […]
03 Desambra 2012, 18:39